Ukuchaza ukuthi capacitor obunjalo, kufanele baqonde ngokucacile isisekelo ngokomzimba umsebenzi begodu nesakhiwo isici esisemqoka zonke ucishe sina zedivayisi electronic.
Epholisayo - liyisici ka i wesifunda kagesi, ehlanganisa plate amabili conductive, ngamunye okuyindawo ehlanganisa uphawu obuhlukile kagesi icala. Plates ahlukaniswe yisivikelo, okubasiza ukuba balondoloze kwenkokhelo.
Kunezinhlobo eziningana ukwahlukanisa izimpahla ezisetshenziselwa capacitors, okufaka ukubumba, mica, tantalum kanye polystyrene. Kabanzi womshini capacitors futhi insulators ezifana emoyeni, emaphepha kanye plastic. Ngayinye yalezi izinto ngempumelelo kuvimbela amapuleti capacitor kusukela ukuxhumana nomunye.
Igama elithi "capacitor" ephawula ikhono layo ukugcina icala zikagesi. Iyunithi capacitance kuyinto Farad.
Uma izitolo capacitor ukushaja 1 elengayo ngaleso umehluko ezingaba phakathi amapuleti alo 1 volt, khona-ke inenani nomthamo owodwa Farad. Eqinisweni, lolu phiko inkulu kakhulu ngokoqobo kunazo. Ejwayelekile capacitance amagugu usebenzisa capacitors kuwela ngaphakathi amabanga milifarad (10.3 F) microfarads (10-6 F) no picofarads (10-12 F).
Ukuze uzwisise ukuthi yini capacitor, kubalulekile ukuba sicabangele izinhlobo eziyisisekelo le ngxenye, kuye ngenjongo, izimo kwesicelo kanye nohlobo Kwe-dielectric Heating.
capacitors electrolytic asetshenziswa izifunda lapho umthamo high liyadingeka. Eziningi zalezi makhemikhali polar. izinto ezivamile ngabo - noma tantalum aluminium. Aluminium electrolytic capacitors ishibhile futhi asetshenziswa kabanzi ngaphezulu. Nokho, tantalum abe nekghono kakhulu enkulu volumetric futhi babe kakhulu izici kagesi.
Tantalum capacitors abe Kwe-dielectric Heating ka tantalum oxide. nokwethenjelwa High, ezinhle imvamisa izici, anhlobonhlobo okushisa ezisebenza. Basuke kabanzi zikagesi lapho ezingeni lelisetulu nomthamo Ubukhulu ezincane. Ngenxa izinzuzo zalo ngobuningi ngoba izidingo electronics umkhakha.
I nemibi tantalum capacitors akunakubangelwa nozwela ishayela-wamanje kanye phezu yamandla aphindeke kabili, futhi isihlobo zibiza kakhulu mikhiqizo.
Amandla capacitors zivamise elisetshenziswa high voltage izinhlelo. Basuke kabanzi ukuze sivale lapho sisilela ukulahleka izintambo zikagesi, futhi ukuthuthukisa isici amandla ukufaka ezimbonini. Made ephezulu metallized polypropylene ifilimu nokusetshenziswa impregnation ekhethekile-non-enobuthi ne nangokuvikela uwoyela.
Kwangathi nesici azibhubhise ukulimala okungaphakathi obanika zokuvikeleka ezengeziwe kwandisa ukuphila service.
capacitors bobumba abe nezinto ezibonakalayo Kwe-dielectric Heating njengoba sobumba. Basuke izimpawu ukusebenza eliphezulu voltage yokusebenza, ukuthembeka, ukulahlekelwa ongaphakeme futhi eziphansi.
Ububanzi ngezikhundla zabo esukela picofarads ambalwa mayelana 0.1 microfarads. Njengamanje omunye esetshenziswa kakhulu izinhlobo capacitors elisetshenziswa zikagesi.
Isiliva mica capacitors indawo okwandile izakhi mica odlule. Yiba ukuzinza okusezingeni eliphezulu, zezindlu hermetic futhi obunamandla per unit ivolumu.
Ukusetshenziswa kabanzi esiliva-mica capacitors kubavikela kuqhathaniswa eqolo.
Ngo iphepha futhi metallized capacitor electrode yazalwa mncane aluminium ucwecwe, kanye Kwe-dielectric Heating, iphepha okhethekile elifakwe okuqinile (esibunjiweyo) noma Kwe-dielectric Heating ketshezi. Zisetshenziswa ongaphakeme-imvamisa radio izifunda ngesikhathi imisinga okusezingeni eliphezulu. Ziyakwazi kancane.
Kungani isidingo capacitor
Kunezindlela eziningana izibonelo ukusetshenziswa capacitors e ezihlukahlukene ngezinhloso. Ikakhulu, amathuluzi asetshenziswayo kabanzi isitoreji signal analog futhi digital nedatha. capacitors variable asetshenziswa ezokuxhumana ngoba imvamisa ukulungiswa kanye ukusetha imishini ezokuxhumana ngezingcingo.
Isibonelo esingokoqobo izicelo zabo ukusetshenziswa ugesi. Lapho, lezi zinto enze umsebenzi bushelelezi (zokuhlunga) we voltage kuyalungiswa eMhlanganweni ekhishwa lezi amadivaysi. Zingase futhi asetshenziswe multipliers voltage odala voltage high, beyizidlova izikhathi eziningana voltage input. Condensers kabanzi izinhlobo ezahlukene voltage converters, uninterruptible amadivayisi ugesi amakhompyutha, njll
Ukuchaza ukuthi capacitor ezinjalo, asikwazi ukuthi lesi sici Ungase futhi ukukhonza njengomdala Igumbi omuhle kakhulu ama-electron. Nokho, empeleni lo msebenzi kunezako ezithile ngenxa izici ze-non-ekahle baqashwe Kwe-dielectric Heating nangokuvikela. Nokho, capacitor has impahla eside ngokwanele ukugcina energy kagesi uma inqanyulwa wesifunda ukushaja, ngakho-ke ingasetshenziswa njengendlela amandla umthombo yesikhashana.
Ngenxa izakhiwo zayo eziyingqayizivele ngokomzimba salezi zici abangu kabanzi ngakho obusetshenziswa embonini electronic kagesi kanye, okuyinto namuhla kuyaqabukela noma yimuphi umkhiqizo kagesi akubandakanyi okungenani eyodwa ingxenye efana noma iyiphi injongo.
Efingqa, singasho ukuthi capacitor - kuyingxenye oyigugu ukuhlukahluka esikhulu zobuchwepheshe kukagesi, ngaphandle okuyinto kwakuyoba engacabangeki intuthuko eyengeziwe kwezesayensi nobuchwepheshe.
Ukudubula kwamaswidi: isigaba samakhono
Londoloza ngokuhlakanipha: Indlela Thenga Akubizi amakhabethe Coupe On-oda
Uyini Curves bokuphila yomgogodla